चितवन मेटलको अध्यक्षमा कार्की
चितवन, २९ चैत । चितवन उद्योग संघ अन्तर्गतको चितवन मेटल इन्जिनियरीङ उद्योग समितिको अध्यक्षमा ताराबहादुर कार्की (प्रेम) चयन भएका छन् ।
भरतपुरमा सोमबार सम्पन्न भएको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनले कार्कीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षहरुमा विष्णुप्रसाद कँडेल, कृष्णप्रसाद भण्डारी र शान्ता पोखरेल न्यौपाने, सचिवमा राजु पडासैनी, सहसचिवमा दयाराम सुवेदी र कोषाध्यक्षमा मोहनलाल श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
अधिवेशनको बन्द सत्रमा सचिव राजु पुडासैनीले प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवेशनको समुद्घाटन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । उनले उद्योगीहरु संगठित हुँदै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चितवन उद्योग संघका महासचिव सूर्यप्रसाद न्यौपाने लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरु आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तासंग भेटघाट र सम्बन्ध सुधार गर्न लागिपरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने आन्तरिक चुनावी रणनीतिमा लागे पनि बाहिरी वातावरणमा देखिएका छैनन् । हरेक चोक र चिया पसलमा कुन पार्टीका को मेयर, को उपमेयर बन्ने भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ ।
नगरमा मेयर, उपमेयर बन्ने आकांक्षीहरुको नाम नेपाली कांग्रेस नगर समितिले संकलन गरिसकेको छ । कांग्रेसका १२ जनाले मेयर पदको लागि इच्छा व्यक्त गरेको नेपाली कांग्रेस कालिका नगर सभापति राजु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मेयरमा इच्छा व्यक्त गर्नेहरुमा कमल आचार्य, शिवराम के.सी., राजु श्रेष्ठ, लिलाबहादुर गुरुङ, सरोज गुरुङ, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, काशीराम गिरी, इन्द्रप्रसाद अधिकारी, मिलन पाण्डे, शिव शर्मा पौडेल, महाश्रम शर्मा र अशोकराज वाग्ले रहेको श्रेष्ठले बताए ।
मेयरका आकांक्षीमध्येबाट सर्वसम्मतको प्रयास थालिएको र २९ गते मंगलबारसम्म सहमतिको आधारमा तीन जनाको नाम क्षेत्रीय समितिमा पठाउने प्रयास भइरहेको श्रेष्ठले बताए । १२ जना नै पार्टीका सक्षम कार्यकर्ता भएकाले पार्टीले अवसर दिए सबैले मेयर भएर काम गर्ने क्षमता राख्ने नगर सभापति श्रेष्ठले बताए ।
मेयरमा इच्छा व्यक्त गरेकामध्ये कमल आचार्यले आफू पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता रहेकोले उम्मेदवारी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पोल्ट्री व्यवसायी शिवराम के.सी.ले पनि मेयरको लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको बताउँदै आएका छन् । उपमेयरमा भने कमला पौडेल, निरुजा श्रेष्ठ र खिलिमा चौधरीले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
कालिका नगरपालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा ५ जनाको नाम चर्चामा रहेको छ । साविक शक्तिखोर गा.वि.स.का पूर्वअध्यक्ष गोपी श्रेष्ठ, साविक पदमपुर गा.वि.स.का पूर्वअध्यक्ष जयचन्द्रप्रसाद चौधरी, नेकपा एमालेका नगर प्रतिनिधि विनोद रेग्मी, नगर सचिवालय सदस्य केशव लामा र साविक पदमपुर गा.वि.स.का पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराज रिजाल पनि मेयर पदका आकांक्षी देखिएका छन् ।
युवामाझ लोकप्रिय रेग्मी, पुराना नेताहरु श्रेष्ठ, चौधरी, लामा र रिजालमध्ये कसले उम्मेदवारी पाउने भन्नेबारे एमाले कार्यकर्तामाझ बहस चलेको छ । बैशाख २ गतेसम्म नगर कमिटीले उम्मेदवारको नाम छनौट गरी पठाउनुपर्ने भएकोले छलफलबाट सर्वसम्मतिको आधारमा नाम पठाउन पहल भइरहेको नेकपा एमाले कालिका नगर कमिटीका संयोजक भिष्मप्रसाद खनालले जानकारी दिए । उपमेयरमा विमला लामा, कमला भट्टराई, कविता लामिछाने र आशा वाईबाको नाम चर्चामा आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयर पदमा रामध्वज डल्लाकोटीको नाम चर्चामा रहेको छ । चर्चाकै क्रममा सुदर्शन अधिकारी र रामचन्द्र पौडेल पनि देखिएका छन् । डल्लाकोटीले इच्छा व्यक्त गरेमा अन्य उम्मेदवारले सर्वसम्मति व्यक्त गर्न सक्ने बताइएको छ । उपमेयरमा मञ्जु सिंखडा, दुर्गा रायमाझी, प्रमिता रिजाल, सरिता लामा र कविता न्यौपानेको चर्चा रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र अहिले वडा भेला र कमिटी गठनमा व्यस्त रहेको माओवादी केन्द्रका कालिका नगर प्रतिनिधि रामध्वज डल्लाकोटीले बताए । बैशाख २ र ३ गते वडावडामा छलफल गरी उम्मेदवारको लागि नाम संकलन गरेपछि मात्र छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकोले अहिले यसै भन्न नसकिने उनले बताए । पार्टीको निर्देशन अनुसार सबै नेता, कार्यकर्ता अगाडि बढ्ने भएकोले सर्वसम्मतिबाटै उम्मेदवार छनोट गरिने उनले बताए ।
नगरभित्रका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल लगायतका साना दलको भने निर्वाचित लक्षित कार्यक्रम र चर्चा परिचर्चा भएको पाइएको छैन ।
एमाले आठ नम्बर वडा अध्यक्ष उम्मेदवारमा देवकोटा
नारायणगढ, २८ चैत । स्थानीय तहको चुनावका लागि चितवनमा नेकपा एमालेले वडा तहबाट उम्मेदवार छनौट सुरु गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर आठको वडा कमिटी बैठकले सर्वसम्मत वडा अध्यक्ष र एक दलित महिला सदस्य उम्मेदवारको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरेको छ । अध्यक्षमा केशव देवकोटा र दलित महिला सदस्यमा पार्वती सुनुवारलाई सिफारिस गरिएको हो ।
यस्तै, कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचमा वडा अध्यक्ष उम्मेदवारमा रूदल महतोलाई सिफरिस गरिएको छ । अन्य पदाधिकारीका विषयमा भने सहमति नभएको एमाले कालिका नगर कमिटिले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, रत्ननगर नगरपालिका पाँच नम्बर वडा अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि कृष्ण चौधरीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको छ । रत्ननगर वडा नम्बर १४, पिठुवामा हरि श्रेष्ठको नाम वडा अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरिएको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले वडा तहबाट कतिपय वडामा सर्वसम्मत नाम सिफारिस हुने र कतिपय वडामा आकांक्षी सबैको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस हुने बताए । चैत ३० गतेभित्र वडा कमिटीको बैठकले वडा अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्न एमाले जिल्ला कमिटीले निर्देशन दिएको छ ।
वडाबाट सिफारिस भएर आएको नाममा जिल्ला कमिटीले बैशाख पहिलो सातापछि अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ । चितवनमा औपचारिक निर्णय गरी वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार छनौट सुरु गर्ने नेकपा एमाले पहिलो शक्ति भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरु उम्मेद्वार छनौटका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । चितवनमा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् ।
नारायणगढ, २९ चैत । नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय भूपू सैनिक तथा प्रहरी संगठन चितवनले नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न गरेको छ ।
नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय भरतपुरमा जिल्ला अध्यक्ष ददिराम देवकोटको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव लम्साल, जिल्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला सदस्य देवी तामाङ लगयातले भूपू सैनिकका समस्याबारे बोलेका थिए ।
पुरुषहरुको तुलनामा नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता निक्कै कममात्र रहेको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । तर, देशको नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका रहने राजनीतिक दलमा नै महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित भएको छैन । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिले देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरुमा पनि महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको छ । मुलुकका मुख्य तीन दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन ।
राजनीतिमामात्र नभई महिलाहरु सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसावले पनि पछाडि परेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा महिला साक्षर प्रतिशत ५७ र पुरुषको ७५ रहेको छ । शिक्षाको कमीका कारण पनि महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा अवसर पाउन सकेका छैनन् । महिलाहरुलाई शिक्षित बनाएमात्र उनीहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्दछन् । शिक्षित महिलाले नै अन्धविश्वास, रुढीवादी बिचार र गलत संस्कृतिको बिरुद्ध लड्न सक्दछन् । यसैगरी महिलाको हातमा आम्दानीको श्रोत पनि छैन । उनीहरुको रोजगारी र आम्दानीको स्रोतसम्म पहुँच पु¥याउन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आम्दानीको स्रोतमा पहुँच नभएकै कारण अधिकांश महिलाले पुरुषहरुको अगाडि हात थाप्नु पर्ने हुन्छ जसले महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । सदियौंदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरु एकैपटकमा पुरुषहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । महिलालाई अवसर नदिईकन उनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने परिपाटी पनि गलत छ । महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पु¥याएर, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक अवशर उपलब्ध गराएर उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन नियमावली अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने छ । यसैगरी हरेक वडामा निर्वाचन हुने पाँच पदमध्ये दुई जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले आगामी स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बृद्धि हुनु भनेको नीति निर्माणको तहमा उनीहरुको पहँुच स्थापित हुनु हो । आरक्षण दिएरै भएपनि धेरै महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउँदा उनीहरुको नेतृत्व क्षमता बढ्छ । त्यसका लागि धेरै भन्दा धेरै महिलाहरुलाई राजनीतिक निर्णयक तहमा पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ ।
बछौलीमा एमालेको वडा कार्यालय
नारायणगढ, २९ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी एमालेले बछौलीमा सोमबार वडा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
नेकपा एमाले रत्ननगर वडा नं. ६, वडा कार्यालयको पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इज्चार्ज कृष्ण खनालले उद्घाटन गरेका थिए । उनले सबैको सहमतिमा वडा अध्यक्षसहितको पदलाई टुङ्गो लगाएर चुनाव प्रचारमा जुट्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । गाउँदेखि केन्द्रसम्म एमालेको अवस्था राम्रो रहेको भन्दै उनले जनताको घरघरमा पुगेर एमालेले गरेका सकारात्मक कामबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
वडा अध्यक्ष विष्णु थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला सचिवालय सदस्य नारायण वन, प्रदेश सदस्य तथा नगर कमिटीका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेमनाथ दुवाडी, नगर अध्यक्ष बद्रिनाथ घिमिरे, जिल्ला सदस्यहरु राजाराम रेग्मी, चण्डिका ढकाल, विशेष नगर कमिटी बछौलीका अध्यक्ष लोकराज भुषाल, क्षेत्रीय सदस्य अर्जुन ढकाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
इन्द्रेणी साँझको प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रवेश पास लिनेहरुलाई बेलुकाको खाना र खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । मौलिक गीत तथा स्थानीय कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष ईन्द्रेणी साँझ आयोजना हुँदै आएको कला मन्दिरका उपाध्यक्ष अमर प्रधानले जानकारी दिए ।
इन्द्रेणी साँझमा अनुराधा क्षेत्री, एकराज रोकाया, सबिना गौतम, बिना सेञ्चुरी, मधु लामा लगायतले गीत प्रस्तुत गर्नेछन् । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड मुख्य प्रयोजक रहेको कार्यक्रमा सानमिगेल, ओल्ड दरबार, चौतारी यातायात व्यवसायी समिति, ग्रिस्भ पावर, बुडलेस ट्रेडिङ, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, त्रिदेव घर जग्गा कारोबार प्रायोजक रहेका छन् ।
मगर गुठीको सम्मान
कालिका, २९ चैत । कालिका नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको काटजुट मगर गुठी समाजको आयोजनामा सोमबार विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने ब्यक्तिलाई सम्मान गरिएकोे छ ।
गुठीले मगर समुदायभित्र रहेका ७० बर्षमाथिका दिलबहादुर सिंजाली मगर र सुमित्रा दर्लामी मगर, विद्यार्थी दिपक सिंजाली मगर, संस्थाका सदस्यहरु बमबहादुर सारु मगर, प्रेमबहादुर राना मगर, टेकबहादुृर राना मगर, जितबहादुर सिंजाली मगर र सुनिमाया सुँयाल मगरलाई दोसल्लासँगै मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मानपत्रले सम्मान गरेको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष बलबहादुर सिंजाली मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संस्थापक बमबहादुर सारु मगर रहेका थिए । सम्मान कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य कुमार आले मगर, पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर सिंजाली मगर लगायतले बोलेका थिए ।